Microsoft Windows 10 maimaim-poana Upgrade voajery indray - News Fitsipika
Microsoft Windows 10 maimaim-poana Upgrade voajery indray
Mihoatra ny 200 tapitrisa no efa mampiasa Windows 10, fa mbola ny taloha sy ny peripherals rindrambaiko mbola miasa raha manaiky izao soso-kevitra fanavaozana?
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Microsoft Windows 10 maimaim-poana fanavaozana voajery indray: telo ny fanontaniana namaly” dia nosoratan'i Jack Schofield, fa theguardian.com ny alakamisy faha-11 Febroary 2016 09.04 UTC
I grady amin'ny Windows 7 ny 10 Ary nijery toy ny zavatra rehetra dia tsara, na dia nanova ny an-trano lamba mpamonjy ary aiza ny sary masina ireo lisitra. Ny zavatra iray tsy afaka mahazo ny miasa no HP OfficeJet 7310 All-in-One fitaovana, izay miasa toy ny mpanonta printy, copier, scanner, ary Fax milina. Ary ny mpanonta asa no hany izay miasa. Steve
New fandidiana matetika mitaky rafitra mpamily vaovao, ary ny fomba fiasany be, matetika izany dia midika hoe mpamily omen'ny ny mpanamboatra. Raha toa ka tsy misy ireo, Microsoft dia hametraka levitra mpamily. Angamba izay no nitranga eto, tsy nahy.
Soa ihany, HP no manome 32-kely sy 64-bit Windows 10 mpamily fa ny HP OfficeJet 7310. Mba hahitana izay mila, marina-tsindrio ny bokotra Start sy Select System. Jereo ao amin'ilay hoe "System type": izany dia hanao hoe zavatra toy ny "64-bit Operating System".
Raha hanova ny varavarana lamba-mpamonjy, any amin'ny Start sakafo ary hifantina Settings. Manaraka, tsindrio Personalisation, dia Lock efijery, ary jereo ny "Screen mpamonjy Settings" eo amin'ny faran'ny pejy. Aorian'izay, ny safidy be mijery tahaka ny olona ao amin'ny Windows 7.
Desktop sary masina izao kivy. Ny Start sakafo dia maneho ny tena-ampiasaina fampiharana, ary ny malaky fidirana, dia afaka paingory ny toerana tena fampiharana ny taskbar - toy ny ao amin'ny Windows 7.
Na izany na tsia, ny sary masina dia mety mbola ho any. Ankavanana-tsindrio eo amin'ny biraonao, mifidy View, dia mandehana ka hatrany ambany ny sakafo izay milaza "Asehoy ny biraonao sary masina". Manindry ny andinin-teny ho azy ireo avy hatrany dia miseho na manjavona.
Raha te-hametraka ny tsy ampy matoanteny, mahita ny fandaharana ao amin'ny Start voalaza (ohatra in Rehetra fampiharana) ary hisintona azy fotsiny ho any amin'ny biraonao. Na izany aza, Mariho fa amin'ny biraonao sary masina fotsiny hitsin-dalana: tsy vaovao farany toy ny Live taila.
Farany, hiverina Settings / Personalisation, Select Themes, ary tsindrio izay milaza "Desktop matoanteny Settings". Zavatra tsy mamela anao manampy na manala tontolo sary masina toy ity PC (antsoina My Computer), User ny Files, Network ary Recycle Bin.
Fitandremana mpamokatra 'rindrambaiko
Efa grady ny Sony VAIO SVE15129CN an'i Windows 10 ary ny zavatra rehetra mandeha tsara. Raha mihazakazaka ho olana taty aoriana, ary manapa-kevitra ny hampiasa ny Windows 10 Installation Media, ny Microsoft tranonkala milaza fa ny fampiharana ny PC izay mpanamboatra nametraka ho uninstalled.
Na dia halako maro tamin'ny Sony fampiharana, ny sasany amin'izy ireo no tena ilaina. Te mba ho nametraka indray rehefa madio reinstallation ny Windows 10.
Raha madio aho hametraka taorian'ny taona iray maimaim-poana fanavaozana Availability (izany hoe 29 Jolay 2016), dia ny dika mitovy ny Windows hampavitrika dia koa? Nikhil
The Windows 10 in-toerana fanavaozana dia somary be madio fametrahana. Windows 10 dia nametraka, ny zavatra taloha no adika manerana (izay indraindray nahavoa ny toe-javatra vitsivitsy), ary avy eo dia ny antitra rafitra fandidiana fotoana voafetra no voatahiry ao mitokana fampirimana. Izany no ilaina Raha manana olana izay tsy ho voavaha amin'ny alalan'ny rafitra Refresh (Settings > Update & Security > Recovery > Reset ny PC) ary te-hiverina ny fanavaozana.
Rehefa hoe:, dia afaka manao ny madio fametrahana avy DVD na USB mampiasa ny Windows 10 Installation Media. Mazava ho azy, Download izany dia tsy ahitana na PC ahitana ny nafatotra ho amboarany mpanamboatra rindrankajy. Tokoa, izany matetika ny tena antony ny madio manao fametrahana. Noho izany, eo anatrehanao no iray, jereo ny VAIO tranonkala pejy mba ho azo antoka fa afaka redownload misy nafatotra ho amboarany rindrambaiko sy ny mpamily ilainao. Ohatra dia ahitana ny Windows 10 fanavaozana pejy, Windows 10 Ahoana no & Support, ary Drivers, mikirao praogramanao & Software.
Tadidio fa Microsoft manome ny PC rehetra mpanamboatra amin'ny levitra Windows fehezan-dalàna. Tsy manana fanaraha-maso ny zavatra hanampiny ho azy, ary tsy misy fomba fahafantarana ny fomba ampanjifaina Windows ny fitaovana.
Na izany aza, satria efa nanao ny in-toerana fanavaozana an'i Windows 10, ny fampahavitrihana famaha izao voatahiry an-tserasera. Raha manao madio fametrahana, dia tokony mampihetsika hatrany, ijerena ny daty.
Hanao ny asa Office taloha?
Hanao ny Excel sy ny teny 2000 hiasa amin'ny Windows 10? Bruce
Ny tena singa ny Microsoft Office toa miasa ao amin'ny Windows 10, ary ny Gabe Microsoft haolo - ny VP ao amin'ny Windows ekipa - nisioka Dikasary izany nihazakazaka Office 95 amin'ny 1995. Ny fampiharana izay toa tena olana dia ny Outlook mailaka sy ny mpikarakara fandaharana. Na izany aza, toy ny misy fandaharana, dia afaka miezaka foana mifanentana Mode. Mba hanaovana izany, marina-tsindrio eo amin'ny fandaharana sy mifidy Properties avy amin'ny rano indray mitete-midina sakafo. Mifidy ilay efajoro milaza hoe "Mihazakazaha izany amin'ny fomba mifanentana for:"Ary avy eo dia mifidy ny dikan-Windows avy 95 ny 8.
Windows 10 Tokony hitana ny Office fandaharana, fa izao afaka mandeha diso. Ny tena tsara, dia tokony hanana ny tany am-boalohany Microsoft Office DVDs sy ny dika mitovy ny vokatra manan-danja mba hahafahanao indray-hametraka izany. (Nisy fandaharana toy ny Belarc Mpanolotsaina dia retrieve ny Birao sy ny Windows vokatra fanalahidin 'avy amin'ny PC: ataovy azo antoka tanteraka fantatrao roa.) Tsy maintsy ihany koa manana backups ny angona, Ary ny hendry mankany aoriana ambony ny rehetra PC eo anoloan'ny lehibe manao fanavaozana.
Na izany aza, Office 2000 dia fahagola. Ary natomboka tamin'ny volana Jiona 1999, ary Microsoft intsony manohana azy amin'ny fiarovana tampina 10 taona maro taty aoriana, amin'ny 2009. Mety hamela anareo hamoha varavarana ny antsoina hoe macro otrik'aretina fanafihana, na dia vitsy ny olona mampiasa Office 2000, Misalasala aho fa ny malware mpanoratra dia mbola lasibatra izany.
manokana, Te hividy vaovao, lavitra nohatsaraina Microsoft Office boky, na mampiasa ny maimaim-poana -tserasera Office programa ao amin'ny OneDrive. Rehefa efa grady ny Windows 10, dia afaka ihany koa ny mametraka ny maimaim-poana Teny Mobile sy Excel Mobile Apps avy amin'ny Windows Store. Ireo no mamela anao hanao asa sasany ivelan'ny aterineto.
Na izany aza, satria ianao mitovitovy 16 taona ao ambadiky ny amin'izao fotoana izao ny Microsoft Office haavon'ny, azonao angamba paosin-kilasy ny LibreOffice 5.1. Tena maimaim-poana, dia azonao atao ny manamarin mba hahazoana antoka fa mamonjy ny raki-daza tsara. Koa, ny LibreOffice 5.1 mpampiasa interface tsara dia akaiky kokoa ny Office 2000 noho izany dia ny Biraon'ny 2016, satria nampiditra vaovao Microsoft kofehy-monina interface tsara amin'ny Office 2007.
• Microsoft Windows 10 maimaim-poana fanavaozana: namaly fanontaniana dimy
• Microsoft Windows 10 maimaim-poana fanavaozana: 10 bebe kokoa ny fanontaniana namaly
• Microsoft Windows 10 maimaim-poana fanavaozana: fito more namaly fanontaniana
• Microsoft Windows 10 maimaim-poana fanavaozana: ny farany fantina
• Microsoft Windows 10 maimaim-poana fanavaozana voajery indray: fito hafa ny fanontaniana namaly
• Ny fanontaniana momba ny Hanavao ny Windows 7 an'i Windows 10, na ny mifamadika amin'izany.
26990	10 Article, Anontanio Jack, Computing, Toetoetra, Jack Schofield, Teknolojia
← Ny zava-drehetra Ianao Mila ho fantatra momba misintona Onja Maro loatra Mason'ny manimba ny Memory →